Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo daah furay biya mareen biyaha ka qaadaya warta KM4 “SAWIRRO” | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo daah furay biya mareen biyaha ka qaadaya warta KM4 “SAWIRRO”
Muqdisho (SONNA)- Guddoomiyha gobalka Banaadair ahna duqa Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) oo uu wehliyo guddomiye ku-xigeenka hawlaha guud ayaa daah-furay hirgelinta Biya-mareen loogu talagalay in biyaha fariista Warta isgoyska Nambar-4 looga saaro.
Cabdulaahi Muuse Caraaye ayaa sheegay inay nidaamiyeen waraha biyahu fadhiistaan oo ay ugu horeyso tan KM4, haatanna ay qorsheynayaan inay ka shaqeeyaan goobaha kale ee ay biyaha fariistaan.
Guddoomiye ku Xigeenka waaxda hawlaha guud ee gobolka Banaadir mudane Cumar Cali Cabdi ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku guuleystay in biyaha ka yimaada Wargta KM4 aysan markale xiri doonin jidka loo aado garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho, ayna u sameeyeen goobo biyaha ay maraan oo ay badda ku shubaan.
Guddoomiyha gobalka Banaadair ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu xoogga saarayo xal u helidda biyaha dhex ceegaaga waddooyinka caasimadda, si loo ilaaliyo bilicda iyo isku socodka magaalada.
“Caqabadda ugu badan marka amniga laga reebo ee na soo wajahda waxa ay ahayd roobabka oo bur buriyey waddooyinkii dhisnaa oo saameyn ku yeeshay bulshada caasimadda, juhdi badan kaddib waxaan ku guulaysanay inaan maarayno caqabaddaasi qayb ka mid ah” ayuu yri Cumar Filish.
Previous articleTaageerayaasha cayaaraha kubadda cagta Brazil oo garoomada dib ugu laabanaya
Next articleKu simaha Wasiirka ganacsiga oo tababar u furay wakiilada ganacsiga Soomaaliya “SAWIRRO”